Dab khasaare dhaliyay oo ka kacay dekadda Caalamiga Beyruut.
Thursday September 10, 2020 - 18:08:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dab khasaara geystay ayaa maarkale ka kacay dekadda ugu weyn wadanka Lubnaan ee dhaca mandiqadda Shaam.
Wararka ka imaanaya magaalada Beyruut ayaa sheegaya in dab xooggan uu ka kacay marsada caalamiga ah ee magaaladaas waxaana ka dhashay khasaara maaliyadeed oo lixaad leh.
Wariyaal ayaa soo sheegay in dabku uu ka kacay bakhaarro lagu keydiyo Taayarrada Baabuurta iyo Olyada kadibna uu ku fiday qeybaha kala ee ee dekadda Beyruut oo wali laga dareemayo saameynta qaraxii weynaa ee dhacay bishii lasoo dhaafay.
Maareeyaha guud ee dekadda caalamiga Beyruut ayaa sheegay in baraamiil Olyo ka buuxda ay qarxeen sababa laxiriira heer kulka oo aad usarreeya balse wuxuu carabaabay in ay socdaan baaritaanno ku aaddan sababta dabka kicisay islamarkaana uu war rasmi ah soo bixi doono.
Dabka ayaa saameyn ku yeeshay xaafado katirsan magaalada Beyrut waxaana laxiray waddooyinka hareer mara dekadda, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda KMG ah ee Lubnaan ka jirta ayaa sheegay in saacado kadib ladamiyay dabkii dekadda ka kacay waxaana kaalin weyn ka geystay damintiisa guddiga difaaca madaniga ah iyo ciidamada melleteriga oo adeegsanayay diyaaradaha qumaatiga ukaca.
Afartii bishii lasoo dhaafay ayay aheyd markii uu qarax dhaliyay dhimashada 191 ruux uu ka dhacay isla dekadda Beyruut wuxuuna qaraxaas abuuray xiisado siyaasadeed oo saameyn ku yeeshay deganaashiyaha wadanka.
Weeraro Khasaara dhaliyay oo lagu qaaday saldhigga ciidanka Itoobiya ee Halgan,Beld Weyne iyo Sh/hoose.
Weerarada Al Shabaab ee magaalada Muqdisho oo sare ukacay.